Marcelo oo Kooxdiisa Real Madrid ula safray Magaalada London… (Maxaa is-beddelay?) – Gool FM
(Madrid) 04 Maajo 2021. Daafaca bidix ee Kooxda Real Madrid, Marcelo ayaa gutay waajibaadkiisa muwaadinnimo ee doorashada Madrid, waxaana uu ka shaqeynayay qeybta codeynta ee xarunta Alcobendas.
Kooxda Real Madrid iyo Marcelo ayaa labaduba isku dayey inay u cudur daartaan guddiga doorashada, isla markaana uu ciyaaryahankan ka soo tago xarunta cod bixinta, si kooxdiisa uu ugula safro Magaalada London 10:30 subaxnimo saacadda Spain maanta oo Talaado ah, isla markaana uga qeyb-qaato kulanka lugta labaad ee afar dhammaadka Champions League oo ay wajahayaan Chelsea.
Nasiib-darro, cudur-daarka Kooxda Real Madrid iyo ciyaaryahanka ayaan noqon mid shaqeeya, Marcelo ayaana xaadiray ballanta iyo xaruntii cod bixinta markii ay saacadda Spain ahayd 8:28 subaxnimo ee saaka.
Sida uu warinayo Warsidaha LaSexta, Marcelo ayaa fursad helay in laga fasaxo shaqada doorashada kaddib markii haweeney da’ weyn ay ka beddeshay booskaas.
Marcelo ayaana markaas awooday inuu dib ugu soo laabto gurigiisa, isla markaana uu xiddigaha kooxdiisa Real Madrid ula safro Magaalada London sida idinkaga muuqata muuqaalka hoose.